Lalàm-pifidianana : miantso ny HCC handray andraikitra Ravalomanana | NewsMada
Lalàm-pifidianana : miantso ny HCC handray andraikitra Ravalomanana
Nanao antso avo manoloana ny nandanian’ny parlemanta ny lalàm-pifidianana ny filoha teo aloha, Ravalomanana. Nitodika manokana amin’ny HCC ny tenany, manoloana ny mety ho fanapahan-kevitra horaisin’izy ireo.
« Miandraikitra ny fanajana sy fampiharana ny lalàmpanorenana hampitsahatra ny fandikan-dalàna eo anivon’ny andrimpanjakana mpanao lalàna ianareo , ka aoka handray ny andraikitra sy araka ny feon’ny fieritreretany, ho modely hanampy ity firenena efa reraky ny fisedrana mafy ity hizotra amin’ny lalan’ny fahendrena, fahamendrehana ary fahamarinana », hoy izy.
Niantso ny filoham-pirenena miandraikitra ny fiarovana ny lalàmpanorenana sy miantoka sy fampandehanana tsara ny andrim-panjakana koa ny tenany, mba tsy sanatria ho tonga amin’ny filazana fa namadika ny lalàmpanorenana.
Tokony handinika lalina
Nohitsiny fa anjaran’ny tsirairay ny mandinika lalina ny voka-dratsin’ireny zava-nitranga ireny, tamin’ny nandaniana ny lalàm-pifidianana. « Miantso ny fahatongavan-tsaina amin’ny maha olom-pirenena matotra, ary ny fitiavan-tanindrazan’ny tsirairay sy ny rehetra aho », hoy izy.
Nanteriny fa tsy manana ny haja sy hasina tokony homena azy amin’ny maha lalàna azy ireo volavolan-dalàna, voalaza fa nolanina tao amin’ny Antenimierampirenena. « Tsy ara-dalàna raha tsy voahaja ny fepetra takina amin’ny fanaovana ny latsa-bato nandaniana ireo lalàna momba ny fifidianana. Tsy voahaja koa ny hasina, ny filaminana ary ny soatoavin’ny Antenimierampirenena amin’ny maha Andrimpanjakana ambony azy. « Miara-mahita ary afaka milaza isika fa very hasina ny Antenimierampirenena, andrim-panjakana andrandraina fa hitondra sy hiaro ny feon’ny vahoaka », hoy ihany izy. Notsiahiviny fa manatanteraka ny asany ao anatin’ny fanajana ny fitsipika fototra ny depiote, araka ny voalazan’ny lalàna.
Tsy manaraka ny fitsipika eny amin’ny Antenimiera
Mandrara ny fanarahana baiko amin’ny fanantanterahana ny latsa-bato na baiko mivantana, na ankolaka, na amin’ny alalan’ny fanerena, na amin’ny fomba hafa izany andininy voalazan’ny lalàmpanorenana izany, araka ny nambarany ihany. Nohizingizininy fa tsy nanaraka ny fitsipika sy ny fomba fanaovan-draharaha mahazatra araka ny maha andrimpanjakana azy ny fepetra nanatanterahana ny latsa-bato tao amin’ny Antenimierampirenena. « Nisy miaramila manao fanamiana tao anatin’ny efitrano fivoriana. Nolavina ny fanisana mialoha ny nanaovana ny latsa-bato ireo solombavambahoaka tonga nivory tao. Nolavina koa ny fandinihana sy fifanakalozan-kevitra momba ny votoatin’ireo lalàna. Mifanohitra amin’ny fitsipika mifehy ny Antenimierampirenena izany rehetra izany”, hoy ihany ny fanambaran’ny filoha teo aloha, Ravalomanana.
Une réponse à "Lalàm-pifidianana : miantso ny HCC handray andraikitra Ravalomanana"
bordeaux33000 10/04/2018 à 22:29
MBA mihaino fanambarana ataon i ragidro lahy filohan anteminieran doholona moa ianareo? Zany ka solo rats y azalahy.ino moa MBA maha filoha azy ao. Asa hitako misongadina ataony ao hitako!!! Raha tsy manatsara an antoko misy azy? Dia manaratsy antokon olona tsy ito y loko politikan kolikoly NY hvm njareo ao.